Ezolile kwaye ethokomele i-2BD ene-WIFI - I-Airbnb
Ezolile kwaye ethokomele i-2BD ene-WIFI
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguNancy
UNancy ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-Quarry Cottage yindlwana yemveli eqaqambileyo nenomoya ebekwe kwindawo ene-idyllic, i-1 km ukusuka kwilali entle yaseSchull emi kwi-Wild Atlantic Way. Iimbono ezothusayo zechweba laseSchull kunye nokuhamba nje kwemizuzu eli-10 ukusuka elwandle.
Indlu evaliweyo enamagumbi amabini okulala, enye kabini kunye newele elinye, ilungele iholide yosapho okanye isibini.
I-Cottage ikumgangatho omnye enemigangatho emincinane eyenziwe ngamaplanga kunye neefestile ezininzi. Ikhitshi / indawo yokutyela, iGumbi leLanga, igumbi lokulala elikhulu elinegumbi lokuhlambela eligcweleyo, igumbi lokulala elinamawele kunye neBathroom.
I-WIFI yasimahla. Umbane kunye nokufudumeza okuphakathi kwe-oyile, umlilo ovulekileyo kunye ne-starter pack, ilinen kunye neetawuli zibandakanyiwe, i-hairdryer, i-cot, isibhakabhaka, i-dvd player, i-CD / i-radio, i-microwave, i-dishwasher, umatshini wokuhlamba, indawo yokuhlala ngaphandle, ifenitshala yegadi, indawo yokupaka yangasese.
Ifumaneka unyaka wonke.
Ilali yaseSchull iqhuba ubude besitrato esikhulu ngokukhetha okumangalisayo kweevenkile kunye neenkonzo ezinobugcisa obuninzi basekhaya kunye nobugcisa bokugoduka njengesikhumbuzo. IMount uGabriel ikhusela ilali ukusuka emantla, ixabisa i-1339 ft ukunyuka ukuya encotsheni yeembono ezimangalisayo kwizibuko, iRoaring Water Bay kunye nekhulu leziqithi zaseCarbery. Iibhayisekile zinokuqeshwa ukuze kujongwe ngokusondeleyo izinto ezibonwayo ecaleni kwendlela yethu engenanto, ngesantya esisezantsi kukho ukuhamba okuninzi, okanye igalufa kwabo bathanda ukuhamba ngenjongo. Kukho iinkundla zentenetya, iinkundla zesquash, indawo yokuphela kweplanethi eIreland kunye nokukhwela ihashe.
Isikhitshane esiya eCape Clear, iihambo zesikhephe, ukujingiswa kwamanzi amatsha kunye netyuwa kunye nokuhamba ngenqanawa ziyafumaneka kubathandi bamanzi. Isikhululo seNkungu yeMizen Head Signal siqinisekisa amava awodwa kwaye ayinyani kuyo nayiphi na imozulu. Ke kukho, ewe, ithuba lokusampula imveliso yasekhaya ebalaseleyo evela elwandle nasefama kukhetho oluhle lwee-pubs kunye neeresityu.
Intle, ithule kwaye ikhuselekile.
Sibekwe kufutshane eStanley House Bed kunye neBreakfast.